कसरी छालालाई स्वस्थ्य राख्ने ? यस्तो छ टिप्स « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
कसरी छालालाई स्वस्थ्य राख्ने ? यस्तो छ टिप्स
९ पुष २०७५, सोमबार १३:०५ मा प्रकाशित
हामी अनुहार तथा केसलाई आकर्षक, मुलायम, चम्किलो बनाउन सौन्दर्य प्रसाधन प्रयोग गर्छौ । तर, सौन्दर्य प्रसाधनले प्राकृति सौन्दर्य दिादैन । त्यसले क्षणिक रुपमा आकर्षक देखाउने मात्र हो । अतः अनुहार तथा केसलाई सुन्दर र स्वस्थ्य राख्नका लागि खानपान, आनीवानी र दिनचर्यामा ख्याल गर्नुपर्छ ।
१- अधिक लो फ्याट डाइट नलिने
२- पर्याप्त निन्द्रा जरुरी
हामी ठान्छौ, सन प्रोटेक्सन क्रिम भनेको केवल बारिह हिँडडुल गर्दा घाममा लगाउने मात्र हो । तर, बाहिर हिँडडुल नगरेको समयमा पनि सन प्रोटेक्न क्रिम आवश्यक हुन्छ ।
४- धेरै तातो पानीले ननुहाउने
६- प्रदूषणमा नबस्ने
७- गुलियो खानेकुरा सेवन नगरौ